'' အဆိုပါ Boys ရဲ့2ရာသီထုတ်လုပ်မှုပြီးသားဖြစ်ပါသည် - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြည့်ရဲ့ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment " 'ဒီ Boys ရဲ့2ရာသီထုတ်လုပ်မှုပြီးသားဖြစ်ပါသည် - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြည့်ရဲ့ - BGR
'' အဆိုပါ Boys ရဲ့2ရာသီထုတ်လုပ်မှုပြီးသားဖြစ်ပါသည် - BGR - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြည့်မယ့်
ဘာသာရပ်ပေးထားအဲဒီမှာအံ့သြစရာဖြစ်ပေမယ့်အမေဇုံမပြုစေခြင်းငှါ ယောက်ျားလေးများ ယင်းစူပါဟီးရိုးဖြစ်ရပ်ဆန်းသူ၏မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်လိမ်အနက်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်တစ်ခုသာရှိပြီးပရိသတ်ကို, တွေ့ပြီပုံရသည်။ နှင့်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှု, တိုကျရိုကျအပြည့်အဝ်ဗလာနှင့်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအများကြီးသူ့ penchant ။
ဒါဟာပြန်လည်စတင်သည့်အခါအမေဇုံစီးရီးအတွက်ယုံကြည်မှုခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည် ယောက်ျားလေးများ ရက်အနည်းငယ်အစောပိုင်းကဒုတိယရာသီသည်။ ပထမဦးဆုံးအပင် streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်အပေါ်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူပြီ။ အမေဇုံကြောင်းပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ကဆိုပါတယ်ကတည်းကစီးရီး၌ဤယုံကြည်မှုအောင်မြင်သောခဲ့ ယောက်ျားလေးများ ပြီးသားအားလုံးအချိန်က၎င်း၏အများဆုံး-watched မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှာကအမေဇုံပြပွဲ၏အရှိန်အဟုန်အပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အဖြစ်2ရာသီရဖို့လိုလားပုံရသည်။
နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ, အ showrunner အဲရစ် Kripke ဒုတိယရာသီထုတ်လုပ်မှုပြီးသားကြောင်းအတည်ပြုဟန်ထားတဲ့ Twitter ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံ, shared ။ ။ သငျသညျ Tomer Capon (ပြင်သစ်), ကရင် Fukuhara (ထိုမိန်းမ) ဂျက် Quaid (Hughie ကမ့်ဘဲလ်) နှင့် Laz အဘိဓါန် Alonso (နို့) အပါအဝင်ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်စီးရီး၏သွန်းအဖွဲ့ဝင်များကအများကြီးကိုကြည့်ပါ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်အသွေးနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်ကြောင့်သင်တန်းသူတို့နေသောခေါင်းစဉ်:
၏ပထမဦးဆုံးရာသီ ယောက်ျားလေးများ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နာရီတည်တံ့ရှစ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို 26 ဇူလိုင်လအပေါ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဒီနှစ်အသစ်သောဖြစ်စဉ်များကိုမျှော်လင့်မနေသင့်ပေမယ့်2ရာသီရိုက်ကူးပြီးသားစတင်နေပြီလျှင်, ငါတို့သည် super- တစ်ရှယ်ယာများအတွက်အပြည့်အဝနှစ်ကစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ ပိုပြီးပြီးစိတ်ပျက်သူရဲကောင်း။
ရာသီ 1 Boys လက်ရှိအမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုအပေါ် streaming ဖြစ်ပါတယ်။
Image ကိုရင်းမြစ်: ဒါဝိဒ်သည် Buchan / အရောင်းသွက် / Shutterstock
BGR - "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏မင်းသမီးဟာ 8 ရာသီအမှိုက်ခဲ့ပြောပါတယ်
နောက်ဆုံးအဆင့်၏အီစတာကြက်ဥပေါ်လာမှကြွလာနှင့်ရက်စွဲအားအလွန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် - BGR
အရေးပေါ်ဖို့စွန့်ပစ်သည်သူငယ်၏အဖွားသက်သေခံ - ဗွီဒီယို
Oprah Winfrey !! မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရှိပါလစေ! - ဗွီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,152